Due Diligence: Understanding and Avoiding it Pitfalls ( Or ) Essentials for M&A 🔍🔍🔍
စီးပွားရေးနယ်ပယ်လောကမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတွေ အတွက် Due Diligence ဆိုတာ ရင်းနှီးပြီးသား အလုပ် process တစ်ခု ပါ…
Due Diligence ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ဥပမာ အလွယ် တစ်ခုပေးရရင် 💰💰💰
ကား အမျိုးအစား/ Brand
အသစ်/ အဟောင်း ?
ဘယ်လိုမျိုး အသုံးပြုထားတာလဲ ( ခရီးကြမ်းတွေမှာ သုံးထားတာလား/ မြို့ထဲပဲလား ? )
ပြစ်မှုရှိမရှိ/ အရင် ပိုင်ရှင် ဒါမှမဟုတ် ရောင်းမယ် Showroom ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ စာရွက်စာတမ်း သတင်းအချက်အလက် မှန်မမှန်
အစိုးရကို အခွန် အာမခံများပေးသွင်းထားခြင်းရှိမရှိတွေကို စစ်ဆေးရပါတယ်…
အထက်ကပြောခဲ့တာတွေ ကတော့ Due Diligence လုပ်ငန်းစဉ်တွေလို့ပြောလို့ ရပါတယ်…
🤔🤔🤔ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေ အရောင်းအဝယ်လုပ်တော့မယ် ဒါမှမဟုတ် ချေးငွေလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တော့မယ် ဆိုရင် ခုနကပြောခဲ့တဲ့ ကား အရောင်း အဝယ်လုပ်တဲ့ Due Diligence processes တွေထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါတယ်…
ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာကို ဝယ်မှာလား ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဝယ်မှာလား ပေါ်မှုတည်ပြီး Financial, Commercial, and Legal Due Diligence အစရှိတာတွေကို စစ်ဆေးရပါတယ်…
မစစ်ဆေးခဲ့ ရင် မလေ့လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ ? ‼️‼️‼️
အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုက်တာတွေ ဆုံးရှုံးသွားပါမယ်…☠️☠️☠️
ကားတစ်စီးကို မစစ်ဆေးပဲ ဝယ်လိုက်ရင် ယာဉ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးထားတဲ့ ကား၊ ဒါမှမဟုတ် ကား ရဲ့ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရေတွေ ဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင်ကြေနေတဲ့ ကားမျိုးဖြစ် နေရင် ဝယ်ပြီးစာချုပ်တွေ ချုပ်ပြီးတော့ မှ ပိုက်ဆံပြန်သွားတောင်း တရားဆွဲလို့ မရပါဘူး…⚡⚡⚡
ထို့နည်းတူပဲ အရှုံးပေါ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကုမ္ပဏီတွေ၊ နိုင်ငံကို အခွန်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဆောင်ထားတာတွေမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဝယ်မိမယ် ရှယ်ယာထည့်သွင်းမိမယ် ငွေချေးမိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရင်းနှီမြှုပ်နှံလိုက်တာတွေက အရှုံး ဖြစ်သွားနိုင်သလို ပေးသင့်တဲ့ စျေးထက် ပိုပေး မိသွားနိုင်ပါတယ်… ☠️☠️☠️
ရောင်းတဲ့လူဘက်ကလည်း မိမိ ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ရှယ်ယာရှင်တွေ ဖိတ်ခေါ်တော့မယ်၊ လုပ်ငန်းတွေကို တိုးချဲ့ဖို့ ရောင်းချဖို့အတွက် စဉ်းစားရာမှာ မိမိကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဝယ်ယူမယ့်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ သူတို့ရဲ့ အနေအထား၊ မိမိကုမ္ပဏီအတွက် ကိုက်ညီမှု စတာတွေကို လေ့လာရမှ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် တန်ဖိုးများပြားလှတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရောင်းအဝယ်များ၊ ငွေချေးခြင်းများ နဲ့ နှစ်ဦးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့မှာ ဝယ်သူ၊ ရောင်းသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Due Diligence process အတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ ဆိုတာ သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
လုပ်ငန်းတစ်ခု ရောင်းတယ် ဝယ်တယ် ဆိုတာ တစ်နေ့ထဲနဲ့ ပြီးပြတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိရင် မလိုလားတဲ့ နှောင့်နှေးကြန်ကြာမှုတွေ အကယ်၍ ဝယ်တဲ့ လူက စိတ်ဝင်စားရင်တောင် သေချာရှင်းလင်း တဲ့ Financial statements၊ company ရဲ့ information တွေ မထုတ်ပြနိုင်ခဲ့ရင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုရရှိမယ့်် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို မဖြစ်သင့်ဘဲ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာပါ… 😔😔😔
🙋🙋🙋မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အခုလက်ရှိ စီပွားရေးနယ်ပယ် မှာ လုပ်ငန်း အကြီးအငယ် တွေရဲ့ အရောင်း အဝယ် Process တွေ ပိုမိုများပြားလာပြီဖြစ်ပါတယ်…